“တနင်္လာ သားသမီများ အတွက် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ကံကြမ္မာ အဆိုး အကောင်း ဟောစာတမ်း”
“တနင်္လာ သားသမီများ အတွက် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ကံကြမ္မာ အဆိုး အကောင်း ဟောစာတမ်း” တနင်္လာ သားသမီးတို့သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ရတတ်သည်။ မိမိဆိုင်းငံ့ ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများ သက်ဝင်အောင် လုပ်ကိုင်ရပါလိမ့်မည်။ သို့်သော် အကြီးအကဲများ၏ အားပေးထောက်ခံမှုများ ရရှိမည်။ အမျိူးသားကောင်းတို့သည် […]
“တနင်္ဂနွေ သားသားသမီများအတွက် ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ကံကြမ္မာ အဆိုး အကောင်း ဟောစာတမ်း”
“အိမ်​​ဂေဟာ လာဘ်​ပွင့်​​အောင် ဆီမီးသုံးခွက်ဖြင့် ပူဇော်ရမည့် ဂါထာ”
အိမ်​​ဂေဟာ လာဘ်​ပွင့်​​အောင် ဆီမီးသုံးခွက်ဖြင့်ပူဇော်ရမည့် ဂါထာ မိမိ အိမ်​​ဂေဟာ လာဘ်​ပွင့်​​အောင်​ အပူ​သောကမျိုးစုံနှင်​. ရင်​ဆိုင်​ ​နေရသူများ အကျပ်​အတည်​များ မ​ထွေးနိူင်​ မအန်​နူ်ိင်​ဖြစ်​​နေသူများ မိမိ အိမ်​​ဂေဟာ ကျက်​သ​ရေ မင်္ဂလာအဖြာဖြာ ဖြစ်​အောင်​နှင့်​ လာဘ်​လာဘ. ပွင့်​လန်း လာ​စေရန် ​အောက်​ပါ အတိုင်း အကျိုး​ပေးလျှင်​မြန်​ စ​ရေအခါ […]
တစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း ၂၄.၁၀.၂၀၁၉ မှ ၃၀.၁၀.၂၀-၁၉ အထိ
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ မှ ၃၀.၁၀.၂၀-၁၉ အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ အတိုက်အခံ ရန်တွေရှိနေတတ် ပါတယ်။ စိတ်သောကများပြားနေ တတ်ပြီး အဘက်ဘက်က ပူပန်မှုများနှင့် လဲ ယှဉ်တွဲနေ တတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စများ အတွက် စကားစစ်ခင်း ရတတ်ပါတယ်။ မောင်နှမသားချင်း အရေးကိစ္စ […]